टुसा उमारेकाे गेडागेडी खानुकाे फाइदै-फाइदा छन् तर खानु अगाडी यति होस् पुर्याएमा मात्र ! – Sapana Sanjal
टुसा उमारेकाे गेडागेडी खानुकाे फाइदै-फाइदा छन् तर खानु अगाडी यति होस् पुर्याएमा मात्र !
June 3, 2021 201
Sapana Sanjal : टुसा उमारेकाे गेडागेडी खानुकाे फाइदै-फाइदा छन् तर खानु अगाडी यति होस् पुर्याएमा मात्र ! टुसाएको गेडागुडी स्वास्थ्यकर हुन्छ तर, यसको सरसफाईमा पर्याप्त ध्यान दिइएन भने यो हा-निकारक साबित हुन्छ किनभने, जब यो टुसाउन थाल्छ, साथसाथै ब्याक्टेरिया पनि पैदा गर्छ । हा-निकारक ब्याक्टेरियाकै कारण अंकुराएको गेडागुडीले शरीरमा प्रतिकुल असर पार्न सक्छ जन यश प्रकार छन्:-
१) टाइफाइड:- यसमा पैदा हुने साल्मोनेला टाइफी नामक ब्याक्टेरियाले टाइफाइडको समस्या ल्याउन सक्छ । यसका साथै ग्याष्ट्रिक, अल्सर आदिको रोगीले पनि अंकुराएको गेडागुडी सेवन गर्नु लाभदायक हुँदैन । यसले ग्यासको समस्या अधिक बढाइदिन्छ । पेट फुलिन्छ किनभने प्रोटिनलाई पचाउन निकै गाह्रो हुन्छ । अंकुराएको गेडागुडीमा पर्याप्त प्रोटिन हुन्छ ।
२) छालामा संक्रमण- अंकुराएको काँचो गेडागुडीमा साल्मोनेला नामक व्याक्टेरिया पैदा हुन्छ । यसले छालामा संक्रमण निम्त्याउँछ । ३) फूड प्वाइजनिङ:- यस्ता खानेकुरा काँचै सेवन गर्दा यसमा रहेको लिस्टीरिया नामक ब्याक्टेरियाले फूड प्वोइजन हुन सक्छ ।
४) मृगौलामा समस्या:- धेरै मात्रामा अंकुराएको गेडागुडी सेवन गर्दा त्यसमा रहेको लिस्टीरिया नामक ब्याक्टेरियाले मृगौलामा असर पार्न सक्छ ।
तेसाेभए कसरी सेवन गर्ने त :- अंकुराएको गेडागुडीमा ब्याक्टेरिया धेरै मात्रामा पाइन्छ । त्यसैले यसलाई काँचो खानु भन्दा उसिनेर खानु राम्रो हो । त्यो भन्दा पनि राम्रो उपाय भनेको, अंकुराएको गेडागुडीलाई बाफमा पकाएर सेवन गर्नु हो । कब्जियत, एनीमिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप भएका र गर्भवती महिलाले बाफमा उसिनेर सेवन गर्नु पर्छ ।
यसकाे सेवका गुणहरु:- खाजा वा रातीको स्न्याक्सको रुपमा सेवन गर्न सकिन्छ । सहि ढंगले अंकुराएको गेडागुडी सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि एकदमै लाभदायक मानिन्छ । यो अंकुराउने प्रक्रियामा जीवित हुन्छ, जसले हाम्रो शरीरका लागि भरपुर पोषक तत्व प्रदान गर्छ ।
यद्यपी गेडागुडी अनुसार त्यसबाट प्राप्त हुने तत्वपनि भिन्न भिन्नै हुन्छ । जस्तो, अंकुरित दालमा पोटासियम र आइरन पाइन्छ भने काबुली चनामा कार्बोहाइड्रेड, फाइबर, प्रोटीन, भिटामिन र मिनरल्स पाइन्छ ।
Prevको-रोना संक्रमणका यि ५ खतरनाक लक्षणहरु जुन देखिनासाथ अस्पताल गइहाल्नुपर्छ !
Nextराजा बिरेन्द्रको त्यो जेठ १९ गते,कहालिलाग्दो ईतिहास,सबै नेपाली टुहुरो भएको दिन ( हेर्नुस् भिडियो )